Dowladda oo war Xaasaasiya ka soo saartay duulimaadyada Kismaayo . — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Dowladda oo war Xaasaasiya ka soo saartay duulimaadyada Kismaayo .
Oomaar oo waraysi siiyay Caasimadatimes ayaa sheegay in joojinta duulimaaaydii tooska ahaa ee Kismaayo ay salka ku hayso in aysan jirin cid ay si buuxda ugu halen karaan duulimaadyada Kismaayo sidaas darteedna ay buuxinayaan kaalintaas banaan, sida uu hadalka u dhigay.
Wasiirka ayaa sheegay inaysan jirin xanibaad la saaray Kismaayo balse go’aanka xukuumadda uu yahay mid lagu ilaalinayo danta guud ee dalka.
Hadalka Oomaar ayaa imanaya xilli maamulka Jubbaland uu soo saaray warbixin qoraal ah oo ku aadan xaaladda amni, siyaasadeed iyo bani’aadamnimo ee ka jirta dowlad goboleedka Jubbaland.
Jubaland waxay sheegtay in shacabka deeganadaasi ay saaran tahay xayiraad sharci darro ah oo dastuurka baal marsan taasoo saameyn ku yeelatay kaliya dhinacyada, ganacsiga, dhaqaalaha, caafimaadka iyo arrimaha gargaarka bani’aadamnimada.
Previous articleDagaal Culus oo dhex-maray Al- Shabaab & Dad Xoolaley ah
Next articleDaawo:Kheyre oo xalay si kadis ah u booqdey dad u dhaawacmay difaaca dalka.
Xuutiyiinta oo weerar culus ku qaadey garoon ku yaala Sacuudiga
DEG DEG:Muuse Biixi oo Sheekh Idiris ugu awood sheegtay hargeysa kuna...